प्रदेश १ को नाम राख्ने तयारी, ‘किरात-कोशी’ नामाकरण जुट्ने बलियो सम्भावाना «
प्रकाशित मिति : ८ माघ २०७८, शनिबार ०९:१३
प्रदेश नं. २ ले ‘पहिचानको आधारमा’ नामाकरण गरेको छ। यसअघि नै बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम नामकरण गरिसकेका छन्।
’’किरात-कोशी’ नामाकरण जुट्ने बलियो सम्भावाना रहेको कुरा छ । ‘बहुपहिचान पनि जोड्नुपर्छ भनेर छलफल चलिरहेको छ,’माओवादी केन्द्रकी एक सांसद भन्छिन्,’किरात कोशी वा किरात सगरमाथा राख्नुपर्छ भनेर समहतिको प्रयास हुदैछ ।
देशको नाम टुंगो लगाउन बाँकी प्रदेश नं. १ को प्रदेशसभामाथि मधेशले टुंगो लगाएसँगै दबाब बढेको छ। यहाँको प्रदेश सरकारले पनि आउँदोे प्रदेशसभा अधिवेशनबाट प्रदेश नामाकरणको विषय टुंग्याउने गृहकार्य थालेको छ।
६ प्रदेशको नामकरण भइसकेपछि स्वभाविक रुपमा प्रेसरमा परेको प्रदेश १ सरकारले पनि आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट नामाकरण गर्ने तयारी थालेको हो।
मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशसभाको आउँदो अधिवेशनमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट सक्रिय सहजकर्ताको भूमिका खेलेर नामाकरणको विषय टुङ्गो लगाउन आफू प्रतिवद्ध रहेको जानकारी दिए।
नेपालका सात प्रदेश मध्ये पाँचवटाले भूगोलका आधारमा प्रदेशको नाम टुंगो लगाएका छन् । प्रदेश–७ ले सुदूरपश्चिम, ६ ले कर्णाली, ४ ले गण्डकी र ३ ले बाग्मती नाम राखेका हुन् । प्रदेश–५ ले लुम्बिनी प्रस्ताव गरेको छ । ट्यस्तैगरी प्रदेश २ ले मधेश प्रदेश राखेर पहिचानको नाम राखेसगंसंगै प्रदेश १ लाई पनि पहिचानसहितको नाम राख्न दबाब थपेको छ ।
प्रदेशको नाम कोसी, सगरमाथा, किरात, किरात–सगरमाथा, लिम्बुवान बिराट कोशी आदी के होला भन्ने सबैको मनमा खुल्दुली रहेको छ । प्रदेशको नाम कोसी, सगरमाथा, किरात, किरात–सगरमाथा, लिम्बुवान, खुम्बुवानलगायत हुनुपर्ने माग छ ।
देशको नामाकरण गर्दा पहिचानको मुद्दा बेवास्तामा परेपनि प्रदेश–१ मा भने पहिचान पक्षधरको मत बलियो रहेकाले प्रदेशको नाम किरात रहने सम्भावना बलियो छ । प्रदेशको नाम किरात मात्रै नरहे पनि कोशी किरात वा सगरमाथा किरातमध्ये एक हुने सम्भावना बलियो छ । प्रदेशको राजधानी तोक्ने समयमा नेकपा सांसदको मत किरात, कोशी र सगरमाथामा बाँडिएको थियो । तर पछिल्लो समय सगरमाथा किरात र कोशी किरात नाम चर्चामा छ ।